अक्सर हाम्रो संसार, जहाँ एक अवधारणा प्रयोग गरिन्छ र मामला, र मामला मा होता, त्यसपछि शब्दहरू आफ्नो अर्थ गुमाउन र तान्न! यो प्राचीन ग्रीस को अनुग्रह हाम्रो भाषामा आएको सौंदर्य र सौंदर्य को शब्दहरू भयो।
Esthete र सौंदर्य - एक फोहोर शब्द
सौंदर्य, मूल अर्थमा, यो आफ्नो संवेदी धारणा मार्फत संसारको मानिसको ज्ञान को प्रक्रिया को सार प्रकट पुस्तकको दार्शनिक अवधारणा हो। । त्यो छ एक esthete - भावना को सक्षम छ जो एक व्यक्ति। र विश्वका कुनै व्यक्ति भएकोले जो हामी सबै aesthetes को दार्शनिक समझ छन् भनेर महसुस गर्न सक्दैन। विपरीत भएको esthete logics छ। र त्यस्ता मानिसहरूलाई सानो छ, तर केही कारणले, र तिनीहरूले हाम्रो समय मा शब्द "esthete" दोष।
सौन्दर्य र expediency
सुंदरता गर्न - प्रकृति expediency गर्न, र यति tends। त्यसैले एक पटक म एक बिट, अन्य मुद्दाहरू मा सारियो विषय मा विचार मा अरस्तू छलफल र यो विचार तल लेखे, तर। र उसलाई पछि आफ्ना अनुयायीहरूलाई यो axiom यो लगभग अनियमित वाक्यांश बनेको छ। र त्यहाँ एउटा दार्शनिक impasse भन्दा थियो। शताब्दीयौंदेखि यो शून्य मा descended छ, तर शब्दहरू आफ्नो कलाकारहरूको द्वारा छानिएन छन्, र यो esthete कि बाहिर गरिएका - अब कुनै पनि मान्छे हो, र केही संसारको एक विशेष ठीक अर्थमा।
दार्शनिकहरू कलाकारहरूको प्रयोगको लागि सर्तहरू दिइएको र गहिरो मुद्दाहरू के छ। र शब्द मानिसहरू बीच एक पैदल लागि भयो, अझै व्यंग्यात्मक, contemptuous overtones खरिद छैन। अब, साधारण मान्छे esthete को बहुमत लागि - किनभने, आफ्नो राय मा, तिनीहरू पनि कुनै न कुनै हो, आसपास बुझ्न गर्छ जसले एक व्यक्ति छ। को को परिभाषा लागि रूसी भाषामा मान्छे को प्रकार एक व्यक्ति किनभने बाँच्न फरक, लक्ष्य जो कोहीले लाभ लागि धोका बिना व्यवहार, तर केवल विधिपूर्वक मा अर्थात्, "आधा-सुखा" .. - सही शब्द छ गर्न सक्छन्।
तर यो सक्छन् रूपमा, संसारको सौन्दर्य र desirability अवस्थित हुन। यी अवधारणाहरु सम्बन्ध संदिग्ध छ, तर कलाकार अझै पनि तिनीहरूलाई codify गर्न सक्षम छन्। तर्क तिनीहरूले नहुनु मा सामान्यतया, त्यसैले दुनिया esthete, वाक्यांश को कलात्मक अर्थमा, ambivalent र pretentious छ।
सौंदर्य - सौन्दर्य को विज्ञान
सौंदर्य, जो मार्फत एक व्यक्ति किन सुन्दर पाता बाहिर आंकडा प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, र अन्य - - दार्शनिकहरू मा छोडेर 2000 साल फर्कंदा, त्यसपछि बीसौँ शताब्दीको सुरुमा कलाकारहरूको लागि सौन्दर्य को विज्ञान गठन तितो? र सफलताको केही हासिल। यो वस्तु सुन्दर न त कुरूप न नै छ भनेर बाहिर गरियो। यो केवल व्यक्तिगत भावना यस्तो बन्नेछ। त्यसपछि दार्शनिकहरू एक विशेष प्रकार मानवता को ठूलो देखि बाहिर खडा र यी मानिसहरू aesthetes भनिन्छ।
हामी सबैभन्दा शिक्षा रूपमा सौन्दर्य5canons आफ्नो भित्री संसार वर्ष स्वीकार र त्यसपछि जीवनको अन्त तिनीहरूलाई पालना गर्नुहोस्। एक esthete - आफै लागि सौन्दर्य नै को canons सिर्जना र अप गर्न5वर्ष कि एक, र आफ्नो जीवन बाँकी छ। त्यस्ता मानिसहरूलाई वास्तविक कलाकार बनाउन संग, अग्रगामी, व्याकुलता र अन्य समस्याग्रस्त व्यक्ति प्रेम।
सौंदर्य लाभ सबैलाई एक सामान्य सेवा
एक व्यक्ति को जीवन सुन्दर र सौंदर्य को धारणा हटाउन भने, यो अर्को दिन सुँगुर zahryukaet। त्यो सौन्दर्य अक्सर छ कुरूप कामहरू हामीलाई राख्छ। केही पनि एक व्यक्ति यो कार्य aesthetically खुसी छैन मा देखिन्छ बस किनभने काट छैन। र पनि प्रत्येक अन्य soritsya जस्तै थिएटर मा अभिनेता रूपमा कला को मान्छे, राम्रो र aesthetically खुसी गर्न प्रयास। सबैभन्दा बरु केहि भन्दा, तिनीहरूलाई यो उदाहरण लिन थियो। एउटै अभिनेता "नाक स्कोरिङ अप" शायद सुन्दर सकिन्छ।
रूपमा सौंदर्य मा समातिए डिजाइनर रूपमा सामान्य। तिनीहरूले घरेलू र उपस्थिति मा आकर्षक उपयोगी कुराहरू गर्छन्। र राम्रो छ कि यो आफ्नो exclusivity दाबी गर्दैन र हामीलाई सिकाउन छैन। तर कार्यकर्ता केहि overplayed उच्च फैशन तथाकथित छन्। सबै पछि, सौंदर्य - यो एक खिसी छ मानव प्रकृति। र आफ्नो अनुसन्धान बाट कहिलेकाहीं disgusted cloying। उदाहरणका लागि, एक महिला कुनै कुरा एक नङ समान हुन दावी के जो कोहीले, छैन गर्नुपर्छ। व्यवस्था सुनको खण्डहरू लागि ज्यामिति अवस्थित छैन।
त्यसैले यो छ, कि उपाय छैन केहि, यो समझदार छैन, पनि सौन्दर्य छ।
प्राचीन ग्रीस को दर्शन र प्रारम्भिक अवधिको यसको विशेषता
गुरु - साँचो समझ गर्न जान्छ कि तारा। एक "गुरु" के हो?
दर्शन मा ज्ञान - कि अध्ययन epistemology र epistemology
ब्रुनो Dzhordano: को पुनर्जागरण को दर्शन
छोला - ती उपवास र vegans लागि सही छनोट। क्यालोरी छोला, कुकिङ प्रविधिहरू, व्यञ्जनहरु
साधारण महिला रोगहरु - पुरानो adnexitis, उपचार र रोकथाम
हाइपोग्लाइसीमिया - यो के हो? हाइपोग्लाइसीमिया: लक्षण, कारण, लक्षण, उपचार, आहार
कागति संग पानी वजन लागि धेरै प्रभावकारी छ
सिद्धान्त र व्यवहार मा युनिसाइकल
तीव्र छोराछोरीको appendicitis। लक्षण र अस्पताल।
एक भ्याकुम क्लिनर लागि ब्रश के हुन्
अपार्टमेंट मा छत को सुन्दर र आधुनिक नवीकरण
कसरी HIPSTER बन्न: subculture विशेषताहरु
त्रुटि 0x000000ED विन्डोज एक्सपी: कसरी सरल तरीका समाधान गर्न
किन शरीरको लागि प्रोटीन चाहिन्छ?
सान्टियागोडेक्युबा क्युबा - एक अद्भुत छुट्टी